Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Kurume 25, 2021
Vamwe vabereki vobvisa vana vavo pachikoro chePrince Edward muHarare mushure mekunge vamwe vadzidzisi vanomwe vabatwa nechirwere cheCovid-19 zvichitevera kuvhurwa kwezvikoro.
Zimbabwe inoenderera mberi nekubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19, uye mukupera kwezuva nezuro, vanhu zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana mana nevana, 49 404, vainge vabaiwa nhomba iyi kusanganisira mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa.
Sangano rePlatform for Youth and Community Development rinoti raparura zvirongwa zvekubatsira vanhu kuChipinge, Manicaland kuti vanzwisise nezvechirwere pamwe nenhomba yeCovid-19.
Vezvematongerwo enyika votatsurana pamusoro pemashoko ekuti hurongwa hwekubaiwa kwenhomba yeCovid-19 hwave kupinzwa zvematongerwo enyika, izvo zvinonzi nevamwe zvinogona kunge zviri izvo zviri kuita kuti veruzhinji vatye kutora nhomba iyi.
Nhengo dzeMDC Alliance dziri kupomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, apo vainge vari mudare repamaende, dzotarisirwa kubhadhariswa mari isiri pasi pezviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica kana paramende ikatambira zvisungo zvekomiti iri kuferefeta nhengo idzi.
Muchirongwa cheWomen’s RoundTable na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai munyika panguva iyo Zimbabwe iri muhurongwa hwekubaya vanhu vayo nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19.